1 वर्ष2महिना पहिले #742 by jimidget
बोइङ बस 737-MAX सँगै आउनुभयो जुन 787 को रूपमा उही इन्जिनहरू चलाउछ जुन चलाउन अधिक आर्थिक हुन्छ, त्यसैले विमानले लामो लम्बाई दिन्छ। त्यहाँ अन्य वस्तुहरू हुन सक्छ कि म बारेमा थाहा छैन। के कुनै मौका छ कि भविष्यमा हामी यसलाई डाउनलोडमा देख्न सक्छौं?
1 वर्ष2महिना पहिले #743 by Jamesman8
यस पोस्टको साथ त्यहाँ धेरै चीजहरू गलत छन्। सबै भन्दा पहिले, 737MAX को लगभग एक वर्ष को लागि वरपर भएको छ, र माईन एक्सएनएक्सएक्स (माल्लोन्डो वायु) देखि व्यावसायिक रूपमा उडान गरिरहेको छ। सबै भन्दा दोस्रो, हाहा हाहाहाहाहा। 2017MAX र 737 एउटै इन्जिन प्रयोग गर्दछ? के तपाई उच्च व्यक्ति हुनुहुन्छ? 787 मा प्रयोग गरिएको इन्जिनहरू सम्पूर्ण 787 फोसेलजजको लगभग एकै आकार हो। 737 ले GE GEnx र रोल्स रॉयस ट्रेंट 787 को प्रयोग गर्दछ, यस बीच 1000 ले CFM LEAP-737B प्रयोग गर्दछ। यस विमानको कुनै राम्रो संस्करणहरू FSX / P1D को लागि TDS बाहिरी बाहेकको छैन। PMDG ले यो सम्भावनाको शब्दमा रिलीज गरेको छैन।
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: व्हाइट
1 वर्ष2महिना पहिले #744 by jimidget
वाह। Jamesman8 सँग एक मनोवृत्ति समस्या छ। म यो सँधै यो अधिकार प्राप्त गर्न सक्दिन, तर, यो समय म नजिक आएको हुँ। यहाँ 737 को अधिकतम श्रृंखला मा Boeing वेबसाइटहरु टेक्न चश्मा यहाँ छ। सायद कसैले यस प्रश्नको उत्तर दिन सक्छ:
1 वर्ष2महिना पहिले #745 by Jamesman8
सन्दर्भको लागि तपाईं कुनै नजिक आइपुग्यो जहाँ नजिकको नजिक छ, तिनीहरूले पुरा तरिकाले फरक इन्जिन प्रयोग गर्छन्, र मैले तपाईंको प्रश्नको उत्तर दिएँ। यस वेबसाइटमा TDS 737 MAX उपलब्ध छ। यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्।
1 वर्ष2महिना पहिले #746 by Gh0stRider203
म y'all TWO विकल्पहरू दिइरहेछु। 1) सँगै जानुहोस् र एक अर्कामा राम्रो हुनुहोस्; वा 2) म यो थ्रेड लक। त्यहाँ कुनै 3rd विकल्प छैन।
1 वर्ष2महिना पहिले #749 by Jamesman8
तपाइँ यसलाई लक गर्न सक्नुहुन्छ, मैले उनको प्रश्नको जवाफ दिएँ। म अशिष्ट हुंदैनु म केवल शुद्ध तथ्याङ्कहरू बताइरहेछु।
तपाईंले प्राप्त धन्यवाद: 45
1 वर्ष2महिना पहिले #751 by Dariussssss
बस किनभने यो सम्पूर्ण विषयले मलाई पहिले कहिल्यै हँसिलो बनाएको छैन, म यसलाई मेटाउन सक्दिन ..... lol
1 वर्ष2महिना पहिले #764 by superskullmaster
शायद यो मात्र हो तर म महसुस गर्दछु यदि कुनै पनि धेरै यसको लागि सोध्दछ भने, तपाईंलाई तिनीहरूलाई दिनुपर्छ। हामी सबैसँग इन्टरनेट र गुगल छ, म मूल पोस्ट प्रतिक्रियाको साथ केहि गलत देख्नुहुन्न। यद्यपि सुन्दर हास्यास्पद थियो।
1 वर्ष2महिना पहिले #778 by Gh0stRider203
एक पोस्ट बनाउँदा के गर्ने (उदाहरण र (खाई ~ ~ "छैन") कसरी पोस्ट गर्न को लागी एक उदाहरणको रूपमा सेवा गर्न स्टिक गरिएको छ) यस्तो पोस्टहरूको जवाफ दिनुहोस्)।
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: Dariussssss
1 वर्ष 1 महिना पहिले #781 by julian1245
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहनु भएको छ। यसका लागी तपाईले तपाईलाई थाहा पाउनु भएको छ कि तपाईले तपाईलाई थाहा पाउनु भएको छ? सहमत हुनुहोस्।
कृपया कुनै नमस्कार व्यक्तिहरू पनि नदिनुहोस् किनभने मलाई थाहा छ कि यो वेबसाइटमा हो
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.223 सेकेन्ड